Soomaali ka Tirsan Golaha Deegaanka Odense oo ka Hadley Wareysigi TV2
Todobaadki hore waxa aan siideynay warbixin ku saabsan wareysi ay gabar Soomaaliyeed siisay Telefishinka 2aad ee dalka Denmark oo hadalhayn ka dhalisey dalkaasi iyo wadamada dariska la ah ee Sweden iyo Norway-ba.
Gabadhaas oo sheegtey in aysan afka Deenishka waxyar ka garaneyso, dalkaasna ay ku nooshaha 19 sano. Hadaba, waxaa warbaahinta bulshada ka soo dhexmuuqdey isla gabadhi oo la hadleyso telefishinka raadiyaha dowlada Denmark oo afka Deenishka ay ku hadasho, loogana turjimin marka nolol maalmeedkeeda ku dhex jirto.
Si aan u ogaano wareysiyadan isqilaafsan iyo xaalada haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Odense, Denmark ayaa Jaamac Buulle Jaamac uu la xariirey, Cabdirishiid Xaaji Abuukara Cabdi oo ka tirsan xisbiga Alternative ee dalkaasi, islamarkaasna ka mid gollaha Deegaanka ee degmada Odensa. Wuxuuna uguhoreyn weydiiyey sida uu isagu u arko arrintan.